Maamulaha Miisaaniyadda: Shaqooyinka, Mushaharka, Waxbarashada - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Maareeyaha Miisaaniyadda: Shaqooyinka, Mushaharka, Waxbarashada
Ku dhowaad urur kastaa wuxuu u baahan yahay qof lagu soo oogo miisaaniyada dhaqaalahooda iyo kheyraadkooda haddaysan ahayn waax. Maaraynta miisaaniyadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah guusha urur, ama aan la kulmin hoos u dhac haddii aan gaarno.
Maareeyaha miisaaniyada ee wanaagsani waxa uu ku hayaa ganacsigu inuu sii socdo wakhtiyo wanaagsan iyo waqtiyo adag labadaba. Bal aynu eegno waxa ay tahay maaraynta miisaaniyadu.
Maareynta Miisaaniyadda oo la Sharaxay
Maaraynta miisaaniyadu waa habka maaraynta iyo dabagalka dakhliga iyo kharashaadka. Inta badan, shirkaduhu waxay leeyihiin miisaaniyado waaxyo gaar ah iyo sidoo kale guud ahaan miisaaniyada shirkadda. Maareeyayaasha waaxyaha waxaa inta badan lagu soo oogayaa maareynta miisaaniyada waaxdooda.
Miisaaniyaduhu waxay inta badan ka kooban yihiin dhinacyada soo socda:
Dakhliga: Dakhligu waa dakhliga ka soo gala iibka, maalgashiga ama ilo kale. Dhammaan dakhliga waa in lagu diiwaangeliyaa miisaaniyadda.
Kharashyada hawlgelinta: Kharashyada hawl-qabadku waa kharashyada la xidhiidha socodsiinta waaxda ama ganacsiga sida dayactirka mishiinka, kirada iyo yutiilitiyada.
Kharashyada raasumaalka: Kharashyada raasumaalka waa maalgelinta waaxda ama ganacsiga. Kharashyada raasumaalka waxay yeelan karaan qaabab badan sida dhismo cusub ama rukhsadda alaabta.
Kharashyada shaqaalaha: Kharashyada shaqaaluhu waxa ku jira kharash kasta oo la xidhiidha shaqaalaynta sida mushaharka iyo daryeelka caafimaadka.
In kasta oo aan in badan oo ka mid ah kuwan eegi doono, ka dib, waxaa jira laba mas'uuliyadood oo waaweyn oo loogu talagalay maaraynta miisaaniyada lagu guuleysto. Midi waa diyaarinta miisaaniyada ta kalena waa dabagalka miisaaniyada.
Diyaarinta miisaaniyada: Diyaarinta miisaaniyada waxaa ka mid ah go'aaminta kharashyada, dejinta xadka kharashka iyo abuurista nidaam dabagal ah.
Dabagalka Miisaaniyada: Dabagalka Miisaaniyada waxa ka mid ah haynta liiska socda ee dhamaan kharashaadka iyo dakhliga si loogu dheelitiro lacagta dhabta ah ee wasaarada iyo kharashaadka.
Akhri: Sida Loo Kala Saaro Xisaabaadka Bangiyada ee Miisaaniyadda 2021 -ka
Sidee loo Maareeyaa Miisaaniyadda?
Maareynta miisaaniyada waxaa lagu samayn karaa xisaabinta lacagta caddaanka ah ama xisaabinta xisaabaadka.
Xisaabinta lacagta caddaanka ah: Xisaabinta lacagta caddaanka ahi waxay diiwaangelisaa dakhliga marka uu ka soo baxo akoonnada bangiga iyo kharashyada marka la bixiyo oo lacagtu ka baxdo xisaabta bangiga.
Xisaabinta xisaabaadka: Xisaabinta xisaabaadka waxay diiwaan gelisaa dakhliga marka la shaqeysto laakiin ka hor inta aan loo wareejin xisaabta bangiga iyo kharashyada marka la soo dalacsiiyo laakiin ka hor intaanay lacagtu ka bixin akoontada bangiga.
Doorashada qaabka xisaabinta ee ku habboon waxay ku xirnaan doontaa arrimo ay ka mid yihiin cabbirka shirkadda, khibradda maaraynta miisaaniyadda, iyo walxaha miisaaniyadda ku jira. Shirkadaha yaryar waxay inta badan adeegsadaan xisaabaadka lacagta caddaanka ah oo ka soo horjeeda xisaabinta urursan oo inta badan ay isticmaalaan hay'adaha waaweyn.
Waa maxay Xirfadaha lagama maarmaanka u ah Maareynta Miisaaniyadda ee aan u baahanahay?
Maareynta miisaaniyada mararka qaarkood waxay noqon kartaa mid aad u adag. Waxay inta badan u baahan tahay xirfadahan si aad si guul leh ugu qabato;
Diyaarinta miisaaniyada sanadka soo socda waa xirfad muhiim u ah maareeyayaasha. Markaad diyaarinayso miisaaniyad sanadeedkaaga, tixgeli waxyaabaha ay ka mid yihiin ujeedooyinka ganacsiga iyo yoolalka waaxda.
Ku billow in aad aqoonsato kharashyada dheeraadka ah ee ay tahay in la bixiyo si ay wasaaraddu u shaqeyso. Markaa waxaad tixgelin kartaa maalgelinta raasumaalka ee hagaajin kara waaxda.
Qaadashada wakhtiga diyaarinta miisaaniyad faahfaahsan oo shaqaynaysa waxay ka dhigaysaa maamulkeeda mid aad u fudud.
Maareeyayaashu waa inay fahmaan sida loo falanqeeyo caafimaadka maaliyadeed ee waaxdooda, iyo suurtogalnimada ururka oo dhan. Faa'iidada iyo khasaaraha ayaa saameyn doona miisaaniyad sanadeedka.
Maareeye miisaaniyadeed oo aad u wanaagsan ayaa dib u eegi kara xisaabaadka oo wuxuu samayn karaa go'aamo xog ogaal ah miisaaniyadooda ku salaysan xogta ay helaan.
Saadaasha maaliyadeed waa habka lagu go'aaminayo sida ganacsi ama waaxdu u fulin doonto wakhti go'aamin mustaqbalka. Maareynta miisaaniyada waa in ay ku jirtaa saadaalin maaliyadeed.
Maareeyayaasha waaweyni waxay isticmaalaan saadaalin maaliyadeed si ay u go'aamiyaan meesha ay tahay inay lacag ku maalgeliyaan iyo halka ay tahay inay ka filayaan kharashyo dheeraad ah.
Tani waxay ka caawin doontaa inay ilaashadaan miisaaniyad dheellitiran ee sanadka.
Waa maxay mas'uuliyadaha lagu soo oogay maareeyayaasha miisaaniyada?
Ururada kala duwan ayaa laga yaabaa inay kaa rabaan inaad qabato hawlo kala duwan, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira masuuliyado guud oo gooya dhammaan shirkadaha.
Xilalkaas waxaa ka mid ah;
Go'aaminta awoodaha maaliyadeed ee ururka, xisaabinta caqabadaha maaliyadeed, iyo ansixinta xeeladaha miisaaniyadda.
Dejinta jaangooyooyin iyo habraac lagu hagayo maamulka miisaaniyad-ururinta.
Abuuritaanka xeeladaha lagu wanaajinayo miisaaniyada ururkeena iyo kharashaadka.
La socoshada qaababka kharashka iyo hirgelinta tillaabooyinka lagu horumarinayo u hoggaansanaanta miisaaniyadaha.
Hirgelinta iyo ilaalinta hab-dhaqannada ugu wanaagsan ee xisaabaadka si loo xaqiijiyo heerka wanaagsan ee maaliyadeed ee ururka.
Bixinta falanqaynta maaliyadeed iyo fikradda istaraatiijiyadeed si loo fududeeyo go'aan-qaadashada heerka sare ee maamulka.
Samaynta iyo horumarinta miisaaniyadaha waaxaha iyo hay'adaha ee dadka iyo hay'adaha ay khusayso.
Falanqee xogta maaliyadeed ee shirkadda (sida maamulka lacagta caddaanka ah, kharashaadka iyo dakhliga) adoo hubinaya in hawlaha maaliyadeed ee shirkadu aanay dhaafin xadka miisaaniyada.
Dib u eegis talooyinka miisaaniyada, codsiyada iyo miisaaniyadaha la dhamaystiray si loogu hoggaansamo xeerarka sharciga ah
Is barbar dhig qiyaasaha natiijada maaliyadeed ee shirkadda iyo kuwa dhabta ah ee dhammaadka xilli-warbixineed kasta oo falanqee faraqa u dhexeeya
Samee saadaal ku saabsan baahiyaha miisaaniyada ee xilliyada xisaabinta mustaqbalka.
Maxaa la iiga baahan yahay in la ii shaqaaleysiiyo Maamule Miisaaniyad ahaan?
Si aad u noqoto maareeyaha miisaaniyada, shirkaduhu waxay kaaga baahan doonaan inaad lahaato waxyaabaha soo socda;
Shahaado jaamacadeed oo xisaabaadka, maamulka ganacsiga, maaliyadda, ama wax la mid ah. Shahaadada mastarka waa faa'iido dheeraad ah.
Ugu yaraan 5 sano oo waayo-aragnimo ah sida falanqeeye miisaaniyadeed, falanqeeye maaliyadeed, xisaabiye ganacsi, ama wax la mid ah
Rikoorka la arki karo ee kor u qaadista koboca ururka iyada oo loo marayo qorshe miisaaniyadeed oo wax ku ool ah.
Aqoon buuxda oo ku saabsan qaababka sharciga iyo hababka xisaabinta ganacsiga
Khibrad u leh software xisaabaadka (QuickBooks, Sage X3, iwm.)
Aqoonta wanaagsan ee MS Excel oo ay ku jiraan aalado horumarsan iyo qaabab
Khibrad qoto dheer ee isticmaalka saadaasha iyo hababka falanqaynta xogta
Aqoonta hab-dhaqannada ugu wanaagsan iyo xeerarka xagga xisaabaadka iyo dhaqaalaha
Awood u leh inuu soo bandhigo xogta miisaaniyadda iyo maaliyadda si cad oo dhammaystiran
Xirfadaha hoggaaminta ee gaarka ah iyo kartida loo igmado si habboon
Shaqooyinka Maamulaha Miisaaniyadda Sare ee ay tahay inaad tixgeliso 2021
#1. Maareeyaha Miisaaniyadda Barnaamijka, Barnaamijka Caafimaadka Maskaxda - HCA
Mushaharka: $68,304.00 – $95,616.00 sanadkii
Goobta: Degmada Thurston - Olympia, WA
Maareeyaha Miisaaniyada Barnaamijka, Barnaamijka Caafimaadka Maskaxda wuxuu bixiyaa falanqayn farsamo oo heer sare ah, talo, iyo talooyin maamulka go'aan gaadhista, oo ay ku jiraan Madaxa Maaliyadeed ee HCA iyo maamulka fulinta wakaalada.
Shaqada masuulka ayaa si toos ah u saameeya maamulka HCA Medicaid miisaaniyada in ka badan $16 bilyan labadii sano ee la soo dhaafay.
Waxaad mas'uul ka noqon doontaa horumarinta iyo la socodka qaybaha muhiimka ah ee miisaaniyadda Medicaid, miisaaniyadda caafimaadka dhimirka, miisaaniyadda maamulka, codsiyada miisaaniyadda wakaaladda, habraacyada qoondaynta, qoraallada maaliyadeed, iyo falanqaynta maaliyadeed si loo hubiyo in habka la qaaday iyo nuxurka dhammaan wax-soo-saarka ay buuxinayaan HCA iyo Xafiiska Maamulka Maaliyadda (OFM) shuruudaha iyo tilmaamaha.
Akhri: 10 Tallaabo oo Miisaaniyadda Loogu Sameeyay Hab Fudud 2021
Booskani wuxuu u baahan yahay aqoon qotodheer iyo xirfad leh hababka farsamada iyo hawlaha loo xilsaaray, iyo macnaha guud ee lagu dabaqay; Tan waxaa ku jira faham buuxa ee barnaamijka Medicaid (sharciyada iyo waajibaadka federaalka iyo gobolka).
Maamulaha Miisaaniyadda Barnaamijku waa inuu awood u leeyahay inuu maareeyo hawlo badan oo mudnaanta sare leh iyo agabyada isla markaaba, isagoo qaadaya hindisaha xallinta mashaakilaadka ama ku talinaya habab kale marka ay habboon tahay.
Maareynta Maaliyadda, Saamaynta Maaliyadda, iyo Taageerada Go'aanka
Miisaaniyadda iyo Maamulka Maaliyadda
Wax ku biirinta horumarinta Medicaid qofkiiba saadaasha; Xaqiiji saxnaanta wax soo saarka saadaasha.
La soco wixii isbeddel ah ee lagama maarmaanka ah, lacag-bixinta gaarka ah, iyo foojarrada joornaalka (JVs) ee adeegyada Medicaid.
Shahaadada Master-ka ee Maamulka Dadweynaha ama goobta la xiriirta iyo laba sano oo waayo-aragnimo xirfadeed ah oo la shaqeyneysa nidaamyo maaliyadeed oo adag oo adag ayaa loo baahan yahay. Waayo-aragnimada gobolka ama hay'adaha kale ee dawladda ayaa si xoog leh loo door bidaa.
Shahaado jaamacadeed oo ku saabsan maamulka dadweynaha ama goobta la xiriirta iyo seddex sano oo waayo-aragnimo xirfadeed ah oo la shaqeyneysa nidaamyo maaliyadeed oo adag oo adag ayaa loo baahan yahay. Waayo-aragnimada gobolka ama hay'adaha kale ee dawladda ayaa si xoog leh loo door bidaa.
Afar sano oo waayo-aragnimo xirfadeed ah dhinacyada maaliyadda, gorfaynta, ama xisaabaadka waxay u dhigantaa shahaadada Bachelor.
#2. Maareeyaha Miisaaniyadda (Maareeyaha 2) - Waaxda Gaadiidka ee Thr Seattle
Mushaharka: $44.71 – $67.09 saacadii
Goobta: Seattle, WA
Iyada oo la raacayo jihaynta Maareeyaha Maaliyadda ee SDOT, Maareeyaha Miisaaniyadda (Maareeyaha 2) ayaa isku dubaridi doona horumarinta miisaaniyada SDOT ee ka badan $700 milyan; la socdaan oo qiimeeyaan waxqabadka maaliyadeed; la-talin iyo la-talin siiyaan qaybaha SDOT ee arrimaha miisaaniyadda; in la sameeyo habraac miisaaniyadeed, lana maareeyo nidaamyada miisaaniyadda.
Booskani wuxuu la shaqayn doonaa waaxyaha kala duwan ee magaalada, agaasimayaasha qaybta SDOT, maareeyayaasha, iyo shaqaalaha heer kasta si loo xaliyo arrimaha maaliyadda iyo miisaaniyadda, taasoo muujinaysa meelaha fursadaha iyo khatarta ah ee daneeyayaasha kala duwan.
Maareeyaha Miisaaniyada waxa kale oo uu si wada jir ah ula shaqayn doonaa Maareeyaha Barnaamijka Horumarinta Caasimada, Maareeyaha Kooxda Maaraynta Portfolio Project, Maareeyaha Xisaabaadka, iyo La-taliyayaasha Istaraatiijiga ah ee ka tirsan kooxda Maaliyadda SDOT.
Intaa waxa dheer, jagadani waa mid ka mid ah xidhiidhada aasaasiga ah ee SDOT iyo Xafiiska Miisaaniyada Magaalada waxayna si joogto ah ula socodsiisaa shaqaalaha Golaha Magaalada ee miisaaniyada iyo dhaqaalaha SDOT.
Hogaami diyaarinta miisaaniyada hawlgelinta SDOT. Dejinta, qiimaynta, falanqaynta, iyo fulinta miisaaniyad sanadeedka iyo qorshayaasha maaliyadeed.
Bixinta kormeerka kooxda mas'uulka ka ah la socodka iyo falanqaynta waxqabadka waaxda ee ka dhanka ah miisaaniyada, ogaanshaha khataraha iyo fursadaha la xiriira dakhliga, kharashaadka iyo arrimaha kale ee maaliyadeed iyo diyaarinta warbixinnada maamulka ee billaha ah.
Naqshad, horumariso, qiimeyso, oo qorto miisaaniyada iyo siyaasadaha qiimaynta iyo habraacyada, oo aqoonso oo ku tali hagaajinta habka.
Dejinta siyaasadaha maaliyadeed ee istaraatiijiyadeed ee mustaqbalka fog lana soo jeediyo talooyinka maamulka SDOT, Xafiiska Miisaaniyada Magaalada, Xafiiska Duqa Magaalada, iyo Golaha Magaalada. U kaxee isbeddelka waaxda iyo falanqaynta saadaalinta agabka si loo taageero go'aan-qaadayaasha maamulka.
Samee, hirgelin, oo wanaaji qalabyada saadaalinta maaliyadeed ee saxda ah iyo layliyada qorsheynta ganacsiga. Aqoonso arrimaha soo ifbaxaya oo soo jeedi talooyin ku saabsan tallaabada sixitaanka.
Iskudubarid diyaarinta, soo bandhigida iyo qaybinta ku meel gaadhka ah iyo warbixinada maaliyadeed ee socda ee ay u baahan yihiin maamulka SDOT, Xafiiska Miisaaniyada Magaalada, Golaha Deegaanka, ama wakaaladaha deeqaha bixiya.
Bixi maareynta maaliyadeed ee ilo badan oo federaal, gobol, iyo maxalli ah.
Xaqiiji u hoggaansanaanta sharciyeynta ee wakaaladaha maalgelinta dibadda.
Shahaadada koowaad ee jaamacadda ee Maaliyadda, Maamulka Ganacsiga, Xisaabinta, ama goob la xidhiidha oo ay ku jirto koorsada rasmiga ah ee xisaabinta iyo aasaaska maaliyadeed.
Ugu yaraan 5 sano oo waayo-aragnimo ah xagga horumarinta miisaaniyadaha, maaliyadda iyo qorshayaasha istaraatiijiyadeed, iyada oo ugu yaraan 2 ka mid ah sanadahaas ay ku jiraan awoodda kormeerka.
MBA, MPA, ama CPA waa la jecel yahay.
Ugu yaraan 7 sano oo khibrad maaliyadeed/miisaniyeed xirfadeed sida kor lagu sharaxay oo leh 5 sano oo khibrad kormeer/maamuleed ah.
#3. Maareeyaha Miisaaniyadda (Mgr. 3) - Adeegyada Dadweynaha Seattle
Mushaharka: $48.93 – $73.38 saacadii
Booskani wuxuu maareeyaa koox ka kooban sagaal (9) falanqeeye maaliyadeed, caawinta qaabaynta siyaasadaha iyo barnaamijyada iyada oo loo marayo wadashaqeyn dhexmarta xarumaha SPU ee ganacsiga, falanqaynta dhamaystiran, iyo xalinta dhibaatada.
Booskani wuxuu la shaqeeyaa kooxaha Heerarka iyo Xisaabinta si ay u horumariyaan xeelado soo jeedin ah oo gacan ka geysanaya qaabeynta siyaasadaha iyo barnaamijyada SPU ee muhiimka ah ee saameeya kobaca tamarta iyo hadafkeeda.
Maareeyaha Miisaaniyadu waxa kale oo uu ka wakiil yahay Qaybta Maaliyadda ee goobaha istaraatiijiga ah, isagoo taageeraya shaqada ay wadaan bulshada iyo falcelinta daneeyayaasha iyo la socodka miisaaniyada barnaamijka iyo agabka shaqaalaha kale ee SPU si loo xaqiijiyo guusha.
Boosku wuxuu u baahan yahay khibrad xagga miisaaniyadda, maaliyadda, maaraynta mashruuca, horumarinta barnaamijka iyo qiimaynta, gorgortanka qandaraasyada, maaraynta loo dhan yahay, iyo kormeerka shuruudaha maalgelinta federaalka iyo deegaanka.
Horumarinta, hirgalinta, iyo la socodka Barnaamijka Horumarinta Caasimada (CIP) iyo Hawlgelinta iyo Dayactirka (O&M) miisaaniyadaha afar (4) Khadadka Ganacsiga, oo leh muraayad sinnaanta jinsiyadeed.
La-socod, lafo-gur iyo ka warbixi heerarka kharashaadka Agaasimaha Maaliyadda, Agaasimaha Waaxda, iyo maamulka sare ee tamarta; soo jeedi talooyin si loo waafajiyo miisaaniyada SPU iyo Xafiiska Miisaaniyada Magaalada (CBO) iyo Xafiiska Duqa Magaalada.
La talinta Agaasimaha Maaliyadda, Agaasime ku xigeenka Laanta, iyo maamulka sare ee tamarta ee go'aamada miisaaniyada, siyaasadaha maaliyadda, sharciga, iyo arrimaha kale ee maaliyadeed.
Samee oo ku taliyaan siyaasadaha la xidhiidha miisaaniyada utility iyo maalgashiyada taageeraya aragtida utility bulshada, oo ay ku jirto taageeridda Agaasimaha Maaliyadda ee horumarinta siyaasadda tamarta si loo maareeyo ku lug lahaanshaha SPU ee mashaariicda magaalada oo dhan; Maareeyaha Miisaaniyada SPU wuxuu u adeegi doonaa khabiir mawduuca aqoonsiga iyo sahaminta arrimaha miisaaniyada iyo maaliyadda ee waaxda.
Abuur oo joogteyso xidhiidh wada shaqayneed oo wanaagsan maamulka SPU, shaqaalaha, iyo daneeyayaasha dibadda: ka sokow bixinta kaalmada farsamo ee khadadka ganacsiga, sii xidhiidh firfircoon maamulayaasha iyo agaasimayaasha si ay u qiimeeyaan oo ay wax uga qabtaan baahida iyo welwelka utility ee miisaaniyadda.
Maamul qashinka adag, biyaha, iyo qulqulka & ilaha maalgelinta biyaha wasakhda, la soco oo saadaaliya kharashaadka.
Hogaami koox ka kooban sagaal (9) khabiiro maaliyadeed oo xirfadlayaal ah oo ku lug leh horumarinta iyo soo saarista miisaaniyada Magaalada. Bixi hoggaan, tababarid, hagid, iyo horumarinta shaqaalaha.
Shan (5) sano oo ah horumarinta miisaaniyada tooska ah iyo khibrad la socodka maaliyadda; waayo-aragnimada maaraynta loo dhan yahay ee shaqaalaha ama habka maaraynta si ay ula macaamilaan tiro badan oo daneeyayaal kala duwan ah.
Shahaadada koowaad ee jaamacadda ee maaliyadda, xisaabaadka, maamulka ganacsiga, ama goob la xidhiidha AMA laba (2) sano oo dheeraad ah oo waayo-aragnimo khuseeya.
#4. Maareeyaha Miisaaniyadda Capital - PACCAR Inc.
Mushaharka: $115,467 ilaa $144,333 sanadkii
Goobta: Bellevue, WA
Maareeyaha Miisaaniyadda Raasamaalku waxa uu si toos ah uga hoos shaqeeyaa Guddoomiye-ku-xigeenka Wax-soo-saarka.
Doorkan, waxaad ku hogaamin doontaa maamulka guud ee shirkadaha dhammaan dhinacyada nidaamka miisaaniyad-samaynta, maaraynta hantida dheeraadka ah, iyo fududeeyaha isku-dubbaridka hababka wax-soo-saarka ee horumarinta hay'adaha kala duwan ee PACCAR.
Waxaad sidoo kale qabataa mashaariic gaar ah sida loogu baahan yahay taageerada maamulka fulinta.
Hubi in loo hoggaansamo meertada qorshaynta & wakhtiga habsocodka miisaaniyadda caasimadda
Soo saarida waqtigeeda ee Codsiyada Miisaaniyadda Bilaashka ah (arrinta "Buug Buluuga")
Soo saarida miisaaniyada raasamaal ee ugu dambeysa ( soo saarista "Buug jaale ah")
Soo saar kooban bil kasta
Soo koobida miisaaniyada ku talagalka ah (qorshaha vs dhabta)
Guddiga Miisaaniyadda raasumaalka ayaa ansixiyay marka la barbar dhigo kharashka hadda jira
Samee oo odoroso koobitaanka qayb kasta oo PACCAR ah
Maaree heerka iyo la socodka Dhammaan wixii ikhtiyaari ah, raasamaalka la ansixiyay iyo codsiyada miisaaniyada beddelka ah ( socda ilaa sanadka)
Wuxuu qabtaa falanqaynta iyo hawlaha maamulka mashruuca ee dib-u-habaynta miisaaniyad-samaynta raasamaalka iyo habka maaraynta hantida go'an.
Naqshad oo dhaqangeli habab cusub, xog ururin iyo warbixinno.
Hirgeli dashboardka aaladda Sirdoonka Ganacsiga (BI) kaas oo siinaya wakhtiga dhabta ah, cusboonaysiinta joogtada ah ee Miisaaniyadda Capital
Waxay siisaa hawlaha isku xidhka wax soo saarka iyo qalabaynta ee maamulka sare ee PACCAR sida la codsado.
Dib-u-eegis bille ah iyo saddex-biloodle ah iyo oggolaanshaha gelitaanka Buugga Gray iyo codsiyada wareejinta raasamaalka
Xakamaynta iyo ansixinta codsiga raasamaal ee la ansixiyay ee kaydka rogid, qalabaynta, iyo xisaabaadka gacanta ku haya shirkada ee dhammaan qaybaha.
Maamul oo cusboonaysii miisaaniyada raasumaalka iyo nidaamyada u hoggaansanaanta
Taageerida PACCAR Istaraatiijiyada Wax Soo Saarka ee Muddada Dheer.
Khibrad shan (5) sano ah oo ku saabsan dhinacyada wax soo saarka, hawlgallada, maareynta mashruuca, macluumaadka iyo nidaamyada taageerada go'aannada.
Shahaadada Bachelor ee injineernimada ama la xidhiidha ayaa loo baahan yahay. Shahaadada Masterka ayaa la door bidayaa.
Aqoonta injineernimada, maaliyadda iyo hawlgallada, oo ay ku jiraan aqoonta shaqada iyo/ama waxbarashada heerka qalin-jabinta ee injineernimada warshadaha iyo wax-soo-saarka, nidaamyada macluumaadka iyo miisaaniyad-samaynta.
Soo bandhig daacadnimo sare, hab-dhaqan xirfadeed mar walba, iyo ixtiraamka kuwa kale
Xirfado gorgortan oo wax ku ool ah oo la xidhiidha dib u eegista miisaaniyada raasumaalka iyo mudnaanta
#5. Falanqeeyaha Maaliyadda/Maareeyaha Miisaaniyadda - Jaamacadda Corban
Goobta: Jaamacadda Corban Salem, Oregon
Falanqeeyaha Maaliyadda wuxuu ku shaqeeyaa jihada VP ee Ganacsiga. Booskani wuxuu mas'uul ka yahay maaraynta fulinta miisaaniyada, wareegga miisaaniyada, tababarka miisaaniyada, iyo saadaalinta iyadoo la horumarinayo xeeladaha kharash-gaynta shaqaalaha iyo macallimiinta.
Booskani wuxuu caawiyaa maamulka software-ka maaliyadeed iyo hirgelinta muujinta wuxuuna u dhaqmaa sidii xiriiriye taageero IT ah oo arrintan la xiriira.
Booskani wuxuu kaloo mas'uul ka yahay horumarinta warbixin maaliyadeed oo cad, kooban oo loogu talagalay go'aan-qaadasho wax ku ool ah, iyo fulinta mas'uuliyadaha xisaabinta maalin kasta, bille, iyo saddexdii biloodba mar.
Maamulka iyo la socodka maamulka miisaaniyada sanadlaha ah ee hay’adda
Dib u eeg warbixinaha maaliyadeed ee bilaha ah ee maamulka kharashaadka iyo kala duwanaanshaha miisaaniyada lana xidhiidh maamulayaasha miisaaniyada si loo xalliyo arrimaha.
Ka jawaab su'aalaha maamulka ee xogta maaliyadeed iyada oo loo marayo cilmi-baaris, warbixinno gaar ah, iyo tababar.
Maamul codsiyada miisaaniyada, dakhliga, ama kharashyada kala wareejinta xisaabaadka, xarumaha kharashka, iyo/ama miisaaniyadaha xaddidan/la qoondeeyey.
U diyaari qaab-buug-hawleedyo loogu talagalay maamulayaasha miisaaniyada oo soo deji miisaaniyada la ansixiyey iyo wareejinta miisaaniyada software-ka maaliyadeed.
Dib-u-eegis ku samee dhammaan isbeddelada tallaabada shaqaalaha ee lidka ku ah helitaanka miisaaniyada oo xalli arrimaha daneeyayaasha.
Ku tababar maamulayaasha miisaaniyada software-ka maaliyadeed iyo hababka la socodka bishiiba.
Samee hababka ugu fiican iyo siyaasada ku saabsan lacagaha xaddidan, socodka lacagta caddaanka ah iyo qorshayaasha kharash gareynta.
Ka caawi dib u eegista Buug-gacmeedka Maaliyadeed.
Hogaami Guddiga Maamulka Maaliyadda.
Maareynta Nidaamyada Maaliyadda
Isku-dubbarid oo la soco shaxda xisaabaadka ee software-ka maaliyadeed ee Agaasimaha Xisaabaadka.
Aqoonso oo dhaqangeli hagaajinta shaqaynta software-ka maaliyadeed.
Bixi maamulka nidaamka profiles user iyo ogolaanshaha.
Bixi caawimo kaabayaal ah oo ku saabsan habaynta dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee onlaynka ah.
Abuur, wanaaji, oo u qaybi warbixinnada maaliyadeed ee joogtada ah wakhtiyada kama dambaysta ah ee daneeyayaasha oo ay ku jiraan maareeyayaasha miisaaniyada, VP ee Ganacsiga, iyo Golaha Wasiirada.
In uu gacan ka geysto horumarinta warbixinnada Guddiga Maaliyadda ee Guddiga iyo Golaha Sare
Ku wargeli go'aan-qaadashada ururrada iyadoo la adeegsanayo cabbirro ku habboon, qiime-kordhin iyo falanqayn.
U diyaari bandhigyada Guddiga iyo Golaha Wasiirada sida la codsado.
Waajibaadka kale iyo masuuliyadaha xisaabaadka sida loo qoondeeyay, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn:
Maamulka lacagta caddaanka ah ee maalinlaha ah
Dib-u-eegista dib-u-heshiisiinta bilaha ah
Ka caawi diyaarinta hanti dhawrka
Akhri: Barnaamijyada Miisaaniyadda Ugu Fiican Lamaanaha
Shahaadada koowaad ee jaamacadda ee xisaabaadka ama maaliyadda ayaa la door bidaa.
3-5 sano oo waayo-aragnimo xisaabaad ah oo xoogga la saarayo warbixinta maaliyadeed ee loo baahan yahay.
Waa in uu leeyahay diiwaan la xaqiijiyay oo hogaaminaya isbeddelka iyo hagaajinta habka.
Waa in uu leeyahay asal xisaabeed farsamo oo xooggan.
Waa inuu lahaadaa ballanqaad Masiixi ah iyo qaab nololeed oo waafaqsan himilada Jaamacadda sida lagu qeexay Bayaanka Iimaanka.
Xirfadda maaraynta miisaaniyadu waa doorasho aad u fiican qof kasta oo ku jira maaliyadda. Iyadoo laga yaabo inay u baahato inaad leedahay khibrad heer sare ah oo la taaban karo oo ku saabsan goobta lagu shaqaaleysiiyo hay'ad la yaab leh, dadaalka lagu helo halkaas ayaa si fiican u soo baxaya. Nala wadaag fikradahaaga ku saabsan arrintan faallooyinka.
Waa maxay celceliska mushaharka?
$ 79,000 sanadkiiba
Ma ku habboon tahay maaraynta miisaaniyadda?
Miyaan u baahanahay shahaadada mastarka si aan u noqdo maareeyaha miisaaniyada?
Maareeye miisaaniyadu ma yahay doorasho shaqo oo wanaagsan?
Maareeyayaasha miisaaniyada mushahar fiican ma helaan?
Shaqeysan karo: https://resources.workable.com/
Macaamiisha Amazon waxay ka dooran karaan kaararka deynta ee kala duwan, labadaba e-commerce behemoth iyo kuwa kale…
Markaad maqasho maaliyad shaqsiyeed, waxa ugu horreeya ee malaha maskaxdaada ku soo dhacaya ayaa ah…